တောင်သမန်သားလေး: August 2015
True Smart 3.5 ဖုန်းတွေကို ဘာ box မှ မသုံးဘဲ Unlock လုပ်နည်း & Firmware တင်နည်း (PDF)
ထိုင်းမှာ အခုနောက်ပြီ true ကနေ ဖုန်းအစုတ်၁လုံးပေးပြီ အလိုက်ပေးလိုက်လဲပေးနေ
တဲ့ true smart 3.5 ဖုန်းကို Firmware တင်နည်းကို PDF လေးလုပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မနက်ဖြန်မှ Firmware နဲ့ အခြားသော Flash Tool များကိုတင်ပေးသွားမှာပါ
Samsung IMEI error ကို Oneclick နဲ့ ဖြေရှင်းမယ်
Samsaung Phone တွေ အတွက် Firmware အမြင့်တင်မိသော်လည်ကောင်း အနိုမ့်ဆင်းမိသော်လည်ကောင်း IMEI ပြသနာတွေကို One Click နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ 
ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးတာ ပါ အဲ့ tool လေးကတော့ Samsaung Remote Client လို့ ခေါ်တဲ့ tool လေးပါhttp://www.unlocksamsungonline.com/files/srs-samsung-free-install.exe အဲ့ Tool ကို
သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အင်တာနက် ရှိဖို့ လို ပါတယ်
ပြီးရင် connect နိုပ်လိုက်ပါ ပြီးရင်ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့် လိုက်ပါ ကြိုးထိုးလိုက်ပါ ဖုန်းရဲ့မော်ဒန် အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ Rescan နိုပ်ပါ ပြီးရင် Baseband repair Tool ထဲဝင်ပါ repair method3မျိုး ရှိပါတယ် အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ ပြင်ကြည့်ပါ တော်ရုံဆိုပြင်လို့ ရပါတယ် အောက်မှာ EFS Backup လို့ ရတယ် Restore လဲ လုပ်လို့ ရပါတယ် ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပဲ ကလိကြည့်ပေါ့ …ကျွန်တော် စမ်းသပ်လို့ အောင်မြင်တဲ့ ဆော့ဝဲတစ်ခုပါ.
Xiaomi ထုတ် Mi/Redmi ဖုန်းတွေမှာ Google Play နဲ့ Google Service App တွေအလွယ်ဆုံးသွင်းနည်း(PDF)
Xiaomi ကထုတ်တဲ့ Redmi/MI ဖုန်းတွေမှာ Internation ROM မဟုတ်ရင် China ROM တုို့ Developer ROM တုို့လုိုမျိုးတင်ထားရင် Google Play ကဲ့သုို့သော Google Service App တွေမပါတတ်ပါဘူး။ ယင်းသို့သော ဖုန်းတွေမှာ Google Play နဲ့ Google Service App တွေအလွယ်ဆုံးသွင်းနည်းကုိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ Xiaomi မှနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Xiaomi Mi Note (2015) ဖုန်းအထိ ဒီနည်းနဲ့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တာကုိုတွေ့ရပါတယ်။
Download “Google Installer”
ကျန်တဲ့ Tutorial တွေကိုတော့ PDF လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်
Credit သက်နုိုင်စုိုး (Myanmar Mobile App)
Mi Fonts Changer (Xiaomi ဖုန်းများကို မြန်မာစာထည့်သွင်းသည့် Android App)
မြန်မာ Developer တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ညီလေး Phyochan ရဲ့
ကြိုစားအားထုတ်မှုဖြင့်ဒီနေ့ August 31, 2015 ရက်မှာထွက်ရှိလာတဲ့
Mi Fonts Changer လေးကိုအားလုံးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုဗားရှင်းမှာတော့ Mi Fonts Changer ဟာ
Author: Ko Htoo August 31, 2015
Samsung Galaxy S6 Edge ကို Root မလုပ်ပဲမြန်မာစာ သွင်းချင်သူများ နဲ့
Root လိုအပ်ဝူများအတွက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Root မလုပ်ပဲမြန်မာစာသွင်းနိုင်ရန်
လိုအပ်တာလေးတွေအရင် Download ရယူလိုက်ပါ။
TWRP recovery >>> Samsung Galaxy S6 Edge 5.1.1 TWRP.tar
Final Solution 3.0 >>> http://www.mediafire.com/download/r99ho7yvf6mmh0k/TotalSolution+3.0+ZawgyiBase.zip
Odin Tool >>> One Click Download
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Odin က PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ TWRP recovery.tar ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ TWRP recovery သွင်းခြင်းပီးဆုံးပါပြီ။
ဖုန်းထဲကိုဖြစ်ဖြစ် SDcard ထဲကိုဖြစ်ဖြစ် Final Solution 3.0.zip ကို ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဖုန်းကို
recovery mode ၀င်ပြီး Final Solution 3.0.zip ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းကို
Zawgyi Font Build-in ထည့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ပြီးဆုံးပါပြီ။ မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ပါပြီ။
Root ပါထပ်လုပ်ချင်ရင်တော့ SuperSU-update.zip လေးကို recovery mode ကနေပဲ install ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
SuperSU-update.zip >>> https://download.chainfire.eu/696/SuperSU
Reverse Movie FX PRO – Magic Video v1.3.2 Pro APK [Latest]
အရမ်းလန်းတဲ့ magic video လေးတွေကို android ဖုန်းပေါ်မှာဘဲ ဖန်တီးကြမယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ apps တစ်ခုပါဘဲ။ မိတ်ဆွေတို့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို ပြောင်းပြန်
effect သုံးပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက ဖန်တီးထားသလိုမျိုး ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာဗျာ
ခင်ဗျားတို့ အချိုရည်ဗူးထဲကနေ အချိုရည်ကိုခွက်ထဲကို လောင်းထည့်နေတာမျိုး ရိုက်ထားတယ်ဆိုပါတော့။ အဲဒီ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အခု apps လေးနဲ့ဖန်တီးလိုက်မယ် ဆိုရင်
ခွက်ထဲက အချိုရည်တွေက ပုလင်းထဲကို ပြန်ပြီး စီးဝင်သွားသလိုမျိုးပေ့ါ။ နမူနာvideo ဖိုင်လေးပါ တင်ပေးထားပါတယ်။ စိတ်ကူးရှိရင် ရှိသလို ဖန်တီးနိုင်တယ်နော်။ ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့
Facebook ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ဝေမျှပေးနိုင်တာပေ့ါဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က လည်း 33 MB ဘဲရှိပါတယ်
ကဲ အခုဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ idea လေးတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို ဖလန်းဖလန်းဖြစ်နေတဲ့
Download From Pcloud (33 MB)
iOS7မှာ Activation Lock ကျနေရင် ဖြည်နည်း (PDF)
iOS ချစ်ပရိတ်သတ်များအတွက် မသိမဖြစ် သိထားသင့်
တတ်ထားသင့်တဲ့ Tip & Tricks တွေထဲမှာဒီနည်းပညာလေးက
ကိုကိုဝင်း( ပြည် ) ရဲ့ iOS7မှာ Activation Lock ကျနေရင် ဖြည်နည်း
ပိုစ့်လေးကိုအားလုံးလည်းအဆင်ပြေသွားအောင် PDF လေးလုပ်ပြီး
iOS7မှာ Activation Lock ကျနေရင် ဖြည်နည်း
Credit ကိုကိုဝင်း( ပြည် )
Stylish Touch Penfor Phones and Tablets
ယနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှု ဘ၀အတွက် အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ တချို့စမတ်ဖုန်းတွေဟာအသုံးပြုချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့ အမျှ မျက်နှာပြင် အပူချိန် မြင့်မားလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြင့်မားတဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ကိုအချိန်အကြာကြီးလက်နဲ့ တို့ထိအသုံးပြုရမှာကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ စတိုင်ကျလှပတဲ့ touch pen လေးတွေကိုတန်ဖိုး ၂ ထောင်ကျပ်သာရှိတာကြောင့် ဝယ်ယူဆောင်ထားသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
မည်သည့် ဖုန်းအရွယ်အစား၊ အမျိုးအစား၊ Android (သို့မဟုတ်) iOS ကြိုက်နှစ်သက်ရာမှာတွဲဖက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဝယ်ယူလိုပါက 09 262 37 8142 သို့ ဆက်သွယ်ကာ ဖြစ်စေ https://www.facebook.com/trendyproducts.bizသို့ message ပို့ထားပြီး ဖြစ်စေ၊ http://www.kaymu.com.mm/pen-for-tablets-and-phones-105468.html တို့မှာဖြစ်စေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
SM-N900 Lollipop v 5.0 Custom recovery သွင်းနည်း။
Author: Ko Htoo August 30, 2015
Samsung Galaxy Note3( Sm-N900 ) ကို version 5.0 မှာ Custom recovery သွင်းချင်လို့
တောင်းဆိုထားတဲ့ အကိုအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးလိုအပ်တာကို အောက်ကလင့်မှာ
Custom recovery >>> SM-N900 version 5.0 Lollipop Custom Recovery
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ Odin က PDA ဆိုတဲ့နေရာမှာ n900-cwm-recovery-6.0.5.0-kk_L5.0(0812).tar ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ဖုန်းမှာ Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပါဝါပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ recovery mode သွင်းခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
ANDROID PHONE များ SCREEN LOCK ( PATTERN / PIN / PASSCODE ) ကျနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်ထားဖို့လိုသလဲ ???
ကျတော်တို့ Android အသုံးပြုသူများအတွက် Screen Lock ( Pattern / Pin / Passcode ) ကျနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်ထား
သင့်သလဲဆိုတာကို ကျတော့်အမြင် နဲ့ အတွေ့အကြုံလေးအရ ကျတော်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Android ဖုန်းတစ်လုံးအသုံးပြုပြီဆိုရင်တော့ လူတိုင်းလိုလို Screen Lock ( Pattern / Pin / Passcode ) ဆိုတာတော့ ထားတက်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို Screen Lock ချထားတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ lock ကို ပြန်မမှတ်မိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ User တော်တော်များများအနေနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ data များကိုတော့ပြန်လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲလိုအခြေအနေမှာ Screen Lock ကို ပြန်ဖြည်နိုင်ရန်
နည်းလမ်း ( ၂ ) မျိုးရှိပါတယ်။ Reset ချပြီးပြန်ဖြည်တဲ့နည်း နဲ့ Software များကို အသုံးပြုပြီး ပြန်ဖြည်တဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Reset ချတဲ့နည်းကတော့ ဖုန်းရဲ့ Internal Memory မှာရှိတဲ့ data တွေကို ဖုန်းကအလိုလိုမဖျက်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆို ကိုယ်ပြန်လိုချင်တဲ့ Contact , Message နဲ့ အခြားအရေးကြီးတဲ့ data တွေကိုပြန်ရနိုင်တော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ data တွေကို
ကျတော်တို့ပြန်လည်လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ Software များကိုအသုံးပြုမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်
အရေးကြီးတာကတော့ Computer ကနေ ဖုန်းကိုသိနေဖို့ပါပဲ။ အဲလိုသိနေအောင် Setting ထဲကဘယ်အရာရာကို အဓိကအနေနဲ့
on ထားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ ??? ကျတော်တို့ အဲလိုအခြေအနေမှာတော့ အဓိကအနေနဲ့ on ထားဖို့လိုအပ်တာကတော့
Setting >>> Developer option ထဲက USB Debugging ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Function လေးကို on ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့
Screen Lock ကို Software တွေနဲ့ပြန်ဖြည်တဲ့အခါ Computer ကနေ ဖုန်းကိုသိရှိနိုင်ရန် support ပေးမှာမပာုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီ Function လေးကိုတော့ on ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ နောက်အရေးကြီးတာကတော့ သင့်ဖုန်းမှာ Root လုပ်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Root လုပ်မထားဘူးဆိုရင်တော့ Software တွေကနေ ဖုန်းကိုသိရှိနိုင်ရန် support ပေးမှာ မပာုတ်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Screen Lock ဖြည်ချင်တဲ့အခါ data တွေမပျက်စီးချင်ရင်တော့ ဒီအချက်နှစ်ချက်ကို ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါမယ်လို့
မသိသေးသူများအတွက် ကျတော်နားလည်သလို ပြန်လည်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Remark ; ယခု version များတွင် Developer option ကိုမတွေ့ရှိပါက About Phone ထဲကနေပြီး Build number ကို ( ၇ ) ချက်လောက်
နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် Developer option ကို ဖော်ပေးပါ။
ref ;Ko Htoo( MMAS )
Third-party App တွေကို iPhone, iPad & iPod Touch မှာအလွယ်တကူ Install လုပ်နည်း
App Store မှ ပိုက်ဆံဖြင့်ပေးဝယ်ရတဲ့ Apps တွေကို မိမိတို့ရဲ့ iOS Device ပေါ်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုချင်သူများအနေနဲ့ Store မှ Official ၀ယ်သုံးစရာမလိုပဲ Third-party Stores ကို Install လုပ်ကာ အဆိုပါ Store ထဲမှ ရယူနိုင်ပါတယ်......
iOS အတွက် Third-party Store App Store တွေများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ အောက်မှာ အသုံးပြုရကောင်းမွန်တဲ့ Store ဖြစ်တဲ့ Kuaiyong third-party App Storeရဲ့ Install လုပ်နည်းနဲ့အသုံးပြုနည်းကိုပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်....
Posted by lin linn at 5:42 AM
အခုအကြောင်းကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးကိုပါဝါမတက်နိင်အောင် နှောက်ယှက်နေတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိနေတာ
1-Volts လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ ၃မျိုးရှိပါတယ်။
1-battery တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းပတ်လမ်းတစ်လျှောက် standby volt တွေရောက်နေတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဖွဲ့ စည်းပုံမတူတဲ့အတွက် Filter capacitor ဘယ်နှစ်လုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောဖို့ ခက်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် RFMD,PA,BL,FLASH Coil,DC to DC,PMU, စတဲ့အပိုင်းတွေ တိုက်ရိုက်ပေးထားတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ standby ဗို့ ပေးထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် (V-BATT) မှာရှိတဲ့ C တွေ IC တွေ တစ်ခုခု
2- VPH လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အထွက်ဗို့ လမ်းကြောင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ ပင်မလမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။အဲဒီ VPH လမ်းကြောင်းတွေကိုဖုန်းမော်ဒယ်အလိုက် FET,AC9,AC6, အစရှိတဲ့ electronic switch လေးတွေတစ်ဆင့်ခံပြီး ပါဝါအိုင်စီကိုပေးသွင်းထားတတ်ပါတယ်။
VPH လမ်းကြောင်းတွေဟာလဲအဖော်နဲ့ အပေါင်းနဲ့ ရှိတတ်တဲ့အတွက် သူနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုခုမှာရှိတဲ့ filter လေးတွေ၊ အိုင်စီလေးတွေရှော့ဖြစ်နေရင် ပါဝါလုံးဝမတက်နိင်တော့ပါဘူး။
3-Output volts လို့ ပြောကြတဲ့ vregs တွေဟာ Switch mode regulator ပိုင်းတွေ programming logic
ပိုင်းတွေ pwm control ပိုင်းတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် တည်ငြိမ်အောင်၊ကောင်းမွန်အောင် လိုအပ်ချက်မရှိအောင်
ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် feed back လမ်းကြောင်းတွေ၊ control လမ်းကြောင်းတွေ၊ bsi လမ်းကြောင်းတွေ မှာ error တစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်လုံးဝပါဝါမတက်နိင်တာမျိုး၊ user interface ရောက်မှ ပါဝါပြန်ကျသွားတာမျိုး၊
ပါဝါစလိုင်းနဲ့ဖွင့်ရင် ရပြီး battery ဖွင့်ရင်မရတာတွေ စတဲ့၉၆ပါးရောဂါတွေတက်လာပါတယ်။
Clock ဆိုတဲ့ခုန်လိုင်းတွေရဲ့ အရေးပါမှုကတော့ digital electronic ပစ္စည်းတိုင်းမှာ မပါရင်မပြီးတဲ့ အရာတစ်ခု
ပါပဲ။CPU အိုင်စီကြီးရဲ့ ပင်မ ခုန်လိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ clock generator အပိုင်းကနေ ဖုန်းတစ်လုံး လုံးမှာရှိတဲ့
data လမ်းကြောင်းမှန်သမျှကို clock နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။clock မပါပဲ data ကြီးသက်သက် မကူးလူးနိင်ပါဘူး။အဲဒီ clock တွေထဲကမှ ပါဝါအိုင်စီနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့ clock တွေကတော့
logic start clock (MSM Clock).
အားလုံးကသူ့ နေရာနဲ့ သူအရေးပါနေပါတယ်။နောက် clock တစ်မျိုးကတော့ I2C လို့ ခေါ်ကြတဲ့ SCL,SDA, လမ်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုင်စီတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး data အချက်အလက်တွေအပြန်အလှန်သယ်ယူပေးပို့ တဲ့ ဆက်သွယ်မှုစံနစ်တစ်မျိုးပါ။ဒီစံနစ်ကလဲ ကာလာတီဗွီ ခေတ်ထဲကပေါ်နေတာပါ။ tuner pad တွေမှာအမြဲတွေ့ နေကြပါ။
ဖုန်းတစ်လုံးစတင်ပါဝါနိုးဖို့ ပါဝါအိုင်စီကစတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိကထိန်းချုပ်သွားတာကတော့ CPU အိုင်စီကြီးပါ။
သူကိုပို့ ပေးလိုက်တဲ့ဗို့ ရောက်တာနဲ့ clock ခုန်လိုင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာအိုင်စီအသီးသီးကိုပေးပို့ ပြီး
address တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ data ကိုအပြန်အလှန်စစ်ဆေးပေးရပါတယ်။အလားတူပါဝါအိုင်စီအတွက်လိုအပ်တဲ့
clock လိုင်းကိုလဲပေးပို့ ရပါတယ်။ MSM Clock ရောက်လာမှသာ ပါဝါအိုင်စီရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ logic control
ပိုင်းတွေ programmable switching mode အပိုင်းတွေဆက်လက်အလုပ်နိင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီ clock ပိုင်းကို logic start clock လိုင်းလို့ လဲခေါ်နိင်ပါတယ်။
ဒီ clock ကတော့ network ပိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး second power ပိုင်းအနေနဲ့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့TCXO Clock ပိုင်းမကောင်းရင် ပါဝါခလုတ်နှိပ်လို့ 
အမ်ပီယာ 0.1,0.2 လောက်တက်ပြီးလွတ်ရင်ပြန်ကျသွားပါတယ်။ TCXO crystal ဖြုတ်ထားမိရင်တော့
0.1A,0.2A လောက်မှာဆန့် ငင်ဆန့် ငင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစ်ခုသတိထားဖို့ လိုတာက
TCXO ကိုပေးထားတဲ့ ဗို့2.8v ရောက်မရောက်စစ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။အဲဒီဗို့ ပျောက်နေရင်လဲ network
ပိုင်းလိုက်လို့ အကျိုးမထူးပါဘူး။တကယ်လို့ ဗို့ ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ TCXO လမ်းကြောင်းသုံးခုခွဲပြီးထွက်လာပါတယ်။တစ်ခုက ပါဝါအိုင်စီကို feedback ပြန်ပေးထားပါတယ်။
တစ်လိုင်းက RX,TX ပိုင်းကိုပေးပြီး တစ်လိုင်းကတော့ CPU ကထိန်းချုပ်ပေးထားပါတယ်။
Sleep clock အပိုင်းကတော့ ပါဝါပိုင်းကိုတိုက်ရိုက်မနှောက်ယှက်ပါဘူး။သူအဓိကဖြစ်တတ်တာက WLAN အပိုင်းမှာ MSM Sleep ၀င်သွားတဲ့အခါ ပါဝါပိုင်းကိုပါ reset တစ်ကြီမ်ချပေးပါတယ်။အဲဒီလို MSM Reset ချချိန်မှာ WLAN အပိုင်းမှာ error တစ်ခုခု တက်နေရင် MSM Reset ဟာ ပါဝါအိုင်စီထံရောက်မလာတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် timer တစ်ခုပြည့်သွားလို့screen ပိတ်သွားချိန်မှာပါဝါကိုလုံးဝပြန်ဖွင့်လို့ မ၇တော့ပါဘူး။
manual reset လုပ်တဲ့အနေနဲ့battery ပြန်ဖြုတ်ပြန်တတ်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ပုံမှန်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်တတ်တဲ့error ကို sleep mode error လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။အများအားဖြင့် wifi အိုင်စီကြောင့်အဖြစ်များပါတယ်။
RESET အနေနဲ့ ကတော့ CPU စီဟာ သူ့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗို့ အားအသီးသီးရောက်တာနဲ့ ကိုယ်ပိုင် clock
generator ပိုင်းစတင်နိုးပြီး clock လိုင်းအသီးသီးထွက်လာပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာ device အသီးသီးကို စစ်ဆေးပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးလို့ I2C လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ device တစ်ခုခုမှာ error ရှိနေရင် တိကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ပါဝါနိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။
ဒါကိုတနည်းအားဖြင့် MSM Reset မလုပ်ဖူးလို့ လဲပြောလို့ ရပါတယ်။ 0.7A လောက်မှာ ရှေ့ ဆက်မတက်တဲ့
OS ပိုင်းကတော့ ဖုန်းမှမဟုတ်ပါဘူး။မန်မိုရီပါဝင်တဲ့မည်သည့် electronic ပစ္စည်းမဆို lowlevel programming code တွေနဲ့ ပါဝါကိုစတင်နိုးထစေပါတယ်။ TV တွေ EVD တွေ မှာတော့ EPROM လို့ ခေါ်တဲ့ memory အိုင်စီလေးထဲမှာ code တွေကိုထည့်သွင်းမှတ်သားထားပါတယ်။အဲဒီမှတ်ထားတဲ့ data code လေးတွေပျက်သွားပြီဆိုရင် စက်မှာပါဝါ မတက်နိင်တော့ပါဘူး။
ဖုန်းတွေမှာတော့ programming code တွေပါဝင်တဲ့ OS ကြီးတစ်ခုလုံးကို အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီး flash memory လို့ ခေါ်တဲ့ emmc ထဲမှာထည့်သွင်းမှတ်သားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့OS ပိုင်းမှာ တစ်ခုခုချို့ ယွင်းနေရင်လဲ ပါဝါမတက်နိင်တဲ့ ပြစ်ချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ V-BATT,VPH,CLOCK,RESET,OS, စတဲ့အပိုင်းတွေဟာ ဖုန်းတစ်လုံးပါဝါ
မတက်နိင်အောင် နှောက်ယှက်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ လေ့လာမိသလောက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit ဖိုး စပ် စု
Mobile Hardware (အခြေခံသမာများအတွက်) မီတာတိုင်းနည်း
မီတာတိုင်းရာမှာ အဓိကအသုံးပြုတဲ့ တိုင်းနည်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်
Volt မှာထားပြီး သက်ရောက်ဗို့အား ရှိမရှိ တိုင်းတာနည်း
ပါတ်လမ်းရဲ့ အတွင်းခုခံ မှု တန်ဖိုး ကိုတိုင်းတာနည်း
လက်တွေ့မှာတော့ ဒီသုံးနည်းနဲ့ တိုင်းတာပြီး error တော်တော်များများ ရှင်းလို့ရပါတယ်
ပါတ်လမ်း တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေ တစ်ဆက်တည်း ရှိမရှိ တိုင်းတာချင်ရင်တော့ မီတာကို အသံမြည်တဲ့နေရာထားပါ
မီတာတံနှစ်ခုကို ပူးလိုက်တဲ့အခါ တဆက်ထဲ ဖြစ်သောကြောင့် အသံမြည်လာပါတယ်
ဆာကစ်ဘုတ်ပေါ်မှာလဲ ထိုနည်း၎င်းပါပဲ ပတ်လမ်း တစ်ဆက်ထဲရှိတဲ့နေရာ နှစ်ခုထောက်မိရင် အသံမြည်ပါလိမ့်မယ်
အကယ်၍ ပါတ်လမ်းအဆက်အသွယ် သေချာပေါက်ရှိရမယ် နေရာ point နှစ်ခုကိုထောက်မိတဲ့အခါ အသံမမြည်ဘူးဆိုရင်တော့ ပတ်လမ်းအဆက်အသွယ် ပျက်နေပါပြီး
နောက်တစ်ချက် ရှော့ရှာတဲ့နေရာမှာ အဓိက C လေးတွေကို တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့
C လေးတွေက Volt ပါတ်လမ်းနဲ့ Groung ကို ခွပြီး volt လှိုင်းမှာ ရောယှက်ပါလာတဲ့ အနှောင့်အယှက်တွေကို G ထဲ ဆွဲချချေဖြတ်တဲ့နေရာနဲ့ volt တွေ သိုလှောင်တဲ့နေရာတွေမှာ သုံးထားပါတယ် အကယ်၍ ဆားကစ်က ရှော့ဖြစ်နေပြီး ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး volt လမ်းကြောင်း
ဘယ်လမ်းကြောင်း ရှော့ဖြစ်လဲ အရင်ဆုံး C လေးတွေအသံမြည်တဲ့နေရာ ထားတိုင်းရပါမယ်
မီတာတံကို တစ်ဘက်ကို G ချ နောက်တစ်ဖက် c လေးတွေရဲ့ ဟိုးဖက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ် ကိုတိုင်း
တစ်ဖက်ပဲအသံမြည်ပြီးတော့ နောက်တစ်ဖက်က အသံမမြည်ဘူးဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အနေအထားပါ
ဟိုဘက်ထိပ်ကော ဒီဘက်ထိပ်ကော အသံမြည်နေရင်တော့ အဲ့ဒီလမ်းကြောင်း ရှော့ကျနေပါပြီး
(၂) Volt တိုင်းတာနည်း
မီတာကို volt skill မှာထားပြီး တိုင်းရပါမယ်
Volt တိုင်းတဲ့အခါ မီတာတံအနက်ကို Groung ထား
မီတာတံအနီကို volt ပတ်လမ်းပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါ ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ volt ပမာဏ ပြပါလိမ့်မယ်
*စက်ပြားကို စပလိုင်းနဲ့ချိတ်ပြီး standby ဗို့ရောက်မရောက်တိုင်းတဲ့ အနေ အထား
*စက်ကို ပါဝါဖွင့်ပြီး အထွက်ဗို့လိုင်းကိုတိုင်း တာရတဲ့အနေ အထား
စတဲ့အမျိုးမျိုးသော အနေအထားတွေနဲ့ တိုင်တာနိုင်ပါတယ်
(၃) အတွင်းခုခံမှုတန်ဖိုး Ohm တိုင်းတာခြင်း
မီတာတံအနက်ကို G ချ
အနီကို ကိုယ်တိုင်းချင်တဲ့ ပတ်လမ်းပေါ်မှာ ထောက်လိုက်
တဲ့အခါ အဲ့ပါတ်လမ်း ရဲ့ ခုခံမှု ohm ဘယ်လောက်ရှိလဲ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Ohm မှန်မမှန် စဉ်းစားပြီး error ရှင်းလို့ ရမှာပါ
ဘယ်မှာ ohm ဘယ်လောက်ရှိရမယ်
ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာတွေ အဆွက်အသွယ်ရှိရမယ်ဆို တာကိုတော့
Schematic Diagram သင်ပြရင်း
Error နည်း သင်ခန်စာတွေ တင်တဲ့အခါ
Credit မိုဘိုင်း ဆားဗစ် သရဲ
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း လက်မှတ်များကို App မှ ဝယ်ယူနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်
ယာဉ်လိုင်းလက်မှတ်များကို Application မှ ဝယ်ယူနိုင်ရန် Green Tickets မှ ဆောင်ရွက်လိုက်သည်။
အဝေးပြေးယာဉ်လိုင်း လက်မှတ်များကို Mobile Application မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း အတွက် ငွေပေးချေခြင်းများကို MPU Card, Visa Card, Master Card, i-banking , mobile banking များဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“App ကို Play Store မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်တချို့မှာလည်း ဖြန့်ထားပြီးပါပြီ” ဟု Green Tickets မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ယာဉ်လိုင်း၊ အချိန်၊ ဈေးနှုန်းနှင့် ခုံနံပါတ်များကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ခရီးစဉ်များနှင့် လက်မှတ်နှုန်းထားများကို ၎င်းတို့၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဝယ်ယူပြီး လက်မှတ်များကို SMS, email တို့ဖြင့် ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Application ကို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ Photoshop အတွက် 3D TEXT PSD ဖိုင်လေး
How to Install TWRP / Without Root Myanmar Font & ...
Third-party App တွေကို iPhone, iPad & iPod Touch မ...
Mobile Hardware (အခြေခံသမာများအတွက်) မီတာတိုင်းနည်...
iPhone & iPad တွေမှာ IMEI number ပျေက်ခဲ့သော်ဘယ်လိ...
♪ ကျန်းမာ​​ရေး​သတင်းများစွာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီသ...
Clash of Clans မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း(For Android Ro...
Mi Fonts Changer for MIUI 7
Frozen KeyBoard & Smart Zawgyi installer ( Lenovo ...
Lollipop Zawgyi Installer (5.0 - 5.0.x)
Electric Circuit များ အခြေခံ ဗဟုသုတ (PDF)
( ROOT ) Samsung Galaxy Note4… SM-N910G version ...
OG Youtube video downloader apk
Galaxy S5 ဖုန်း version 5.0 Root လုပ်နည်း။
Facebook တွင် အလှူငွေ တောင်းခံသည့် Donate Button က...
ဖုန်းမှာ Tool ကိုလိုသလိုသုံးနိုင်မယ့် - 3C Toolbox...
SD Maid Pro – System Cleaning Tool v3.1.3.9 Cracke...
မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက် အသုံးပြုလမ်းညွန် (စာအုပ်)
ဖုန်း user တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - SIM Manager v: 5.6...
Wpa Wps Tester Premium 2.3.5 Cracked APK Is Here !...
AppMgr Pro III (App2SD) 3.65 APK
No Root,No MM Font but MMfontကိုသုံးနိုင်တဲ့Apk(MM...
Translate လုပ်ပေးမယ့် APK လေးပါ
ဖုန်းမှာ သူများယူမသုံးစေခြင်တဲ့ App တွေကို log ချထ...
Android Device မှာ Lock Pattern & Password တွေကို ...
THE MYANMAR’S ANDROID (စာအုပ်)
iPhone တွေဟာ Android ထက် ဘာကြောင့် ပိုလုံခြုံစိတ်ခ...
♪ ဖုန်းဝယ်ရာမှာ internal များတာ ဘာကြောင့်ဝယ်သင့်သလ...
♪ System App တွေကို Remove လုပ်ပေးမယ့် - System Ap...
♪ မိမိ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ မေးမြန်း ...
♪ Battery နှင့် Cell များအကြောင်း ♫
oppo r 821ကို root ဖောက်ပီး မြန်မာစာ ထည့်ချင်သူမှာ...
ဓါတ်ပုံတွေကို Effect မျိုးစုံဖြင့် ဖန်တီးတိုင်တဲ့ ...
♪ တယ်လီနော မှ Super Pwar (စူပါပွား) အစီအစဉ်ဖြင့် ဖ...
♪ “MyanPay တွင် MPU ကတ်ဖြင့်ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပြီ”...
Adobe Photoshop Design Tutorials ပေါင်စပ်ဖန်းဒီဇို...
Mobile Phone ၏ Hardware ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ရေးနည်းလ...
Computer problems & errors များ၏ Solutions များလေ့...
G, H+, E, 3G နဲ့ LTE ဆိုတာ (PDF စာအုပ်)
သင့်ရဲ့ Android Phone ကိုသန့်ရှင်းသွက်လက်မြန်ဆန်အေ...
ကာတွန်း၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗီစီးရီးများကို အပြင်လောကပုံရ...
စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် Wun Zinn Apk
အနီးအနားကလွှင့်ထားတဲ့ Wifi တွေရှာဖွေပြီးသုံးနိုင်တဲ...
ဒီဇိုင်းအလန်းလေး facebook အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေတေ...
Android Version အသစ် Marshmallow (သို့မဟုတ်) အိစိအ...
♪ “Android ထဲမှာနည်းနည်းကလိကြည့်မယ်” (ဗဟုသုတလည်းရ ...
♪ “နည်းပညာသတင်းတွေအမြဲUpdate သိနေစေနိုင်မယ့် အသုံး...